Jama Hursow | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Qoraalkaan gaaban wuxuu tibaxayaa khilaafka soo jiitamayay ee u dhaxeeya ururada iyo maamulada masaajidada wadankaan Norway. Waxan wada ogsoonahay in khilaaf haraadiyay bulshada Soomaaliyeed tobanaankii sano ee lasoo dhaafay. Cilmi baarayaasha iyo dad badan oo aqoon durugsan u leh arimahaan, waxay soo xiganayaan in dhibaatooyinkaan haraadiyay bulshada Soomaaliyeed ay yihiin arimo badan ee dhinacyo badan ka kooban. Sidaa darteed aan la dhihi karin hal arin ayaa keentay dhibaatootinkaan ku habsatay bulshada Soomaaliyeed. Dadka arimahaan Soomaalida haysata odorasa waxay sheegaan in caqabaha haysta Soomaalida ay ka mid tahay: arimo qabiil, arimo diineed, dhaqanno soo jireen ah, aqoon yari, awood mid dhaqaale …
Siddii ay doowladii dhexe u burburtay 1991, waxa meesha ka baxay dhammaaan adeegyadii bulshada iyo inta badan arimaha aas-aasiga u ah bulshada Soomaaliyeed. Maqaalkaan waxaan rabaa inan inyar kataabto muhiimada ay u leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay helaan Kaarka Aqoonsiga iyo Baasaboorka. Waxa siddoo kale wax kataabanayaa dhibaatooyinka uu leeyahay lahaansha la’aanta Kaarka Aqoonsiga (National ID Card). Wadan marka la dhaho waxa jira arimo aas-aas u ah in wadankaas laga helo. Waxa kamid ah, calan ugaar ah, dhul joqraafiyada ugaar ah, ciidan ugaar ah, luuqad, xuduudo, maamul, lacag, madaxbanaani iyo waliba Kaararka Aqoonsiga iyo inkale oo badan. Markaas ayaa …
Beeraha Soomaaliya waxa kasoo go’a dalagyo iyo qudaar farabadan, taas oo beeraleeyda magaalooyinka u suuq-geeyaan. Qudaartaas dabcan waxa iibsada maqaaxileyda, dukaamanka iyo macaamiil kale haba ahaadaan kuwa kale ee sii iibgeeya. Qudaarta waxa lagu yaqaanaa in marka ay soo go’do durbadiiba in la isticmaalo ay ku fiicantahay ama in markaas la xanaaneeyo, si aysan u halaabin. Hadaba talooyinkaan hoos ku xusan raac si ganacsigaaga u wanaagsanaado isla markaasna cunto wanaagsan ee wax tar leh aad usoo saartid. Qudaarta marka ay soo go’do waxa u daran dhowr waxyaabood oo inta badan cimiladu sababto. Waxa ka mid ah qoraxda iyo dabeeysha. …
Aqirtayaasha sharafta leh ee ku xiran webkeena Tuke Somalism sidaa innooga barateen waxaan u taaganahay wixii faa’ido iyo hormar u ah bulshadeena inaan idinla wadaagno. Hadaba waxaan rabnaa maanta inaan idila wadaagno fursadooyin shaqo iyo ganacsi kabanaan wadankeena Soomaaliya. Waxa macquul ah fursadahaan qeyb ka mid ah inay horey uga jireen wadanka, laakiin sidaa uguma badna, walina wey u baahanyihiin inay helaan bulshadeena fursadaha nocaan ah. Haddii wadan dhaqaalihiisa la doonayo in kor loo qaado ama lahormariyo waxaa fursad loosiyaa in ay dadka ay maalgashan karaan ayna u tartami karaan ganacsiga iyo wax soo saarka wadanka. Ha ahaadaan …
Aqristayaal waxaan horey oga sohadalnay waxyaaabaha keena guusha qoyska wanaagsan, amaba sirta qoyska wanaagsan. Waxyaabaha aan horey oga sohadalnay waxaa ka mid ahaa: in layareeyo hadalka kiisa aan wanagsaneen, runta iyo daacadnimada, baahida sariirta iyo isticmalka hadalka naxriista leh. Waxaa sidokale halkan idinkugu sogudbineynaa maanta qodobo kale oo aad muhiim ugu ah jiritaanka qoyska, islamarkaana dhameestiraya guusha qooyska wanaagsan. Waxaa ka mid ah: – Guurka waa sir ee ilaasho. Waa maxey guurka waa sir macnaheeda ileen guurkani wuxuu ahaa mid lawada ogaa waqti badana soqaatay ugu danbeeentiina noqday guur lawada ogyahay, farxad iyo damaashaad badanna loosameyey. Micnaha aan ulajeeda …
Micno ahaan ereyga ‘Dimuqraadiyad waa ismaamul dadweyne oo midaysan isla markaasna loo simanyahay xuquuqda rag iyo dumarba. Xuquuqdaas oo ah inaad adigu wax dooran karto iyo in lagu doorankaro, sidoo kale inaad ka qeyb-qaadato waxyaabaha ugu muhiimsan bulshada adigoo ku muujinaayo rabitaankaaga taas oo ah ‘Haa, mise Maya. Dabcan, waxaan maqaalkaan usoo qaatay ayaa waxay tahay inan fahano micno ahaan ‘maxay xambaarsantahay dimuqraadiyad, xaggee ka imaaday? anaga haddii aan Soomaali nahay maku dhaqanaa dimuqraadiyada? Ereyga ‘Dimuqraadiyad wuxuu asal ahaan kasoo jeedaa wadanka Gariiga (Greece). Micno ahaan waa labo erey ee kala ah (dêmos) oo ah dadka iyo (kratos) …
Inteena badan waan sheegnaa been, laakiin waa kala been badanahay. Ruuxa markuu beensheegaayo labo mid unbaa jirta: inuu been sheego si`uu ugu hortago si aan dhaawac ama dhibaato usoo gaarin qof kale, ama inuu danno gaar ah uleeyahay, ee sidaas darteed usheegayo beenta. Hadaba halkaan waxan idinla wadaagayaa 7 waxyaabo oo lagu garan karo inuu qofka been sheegaayo. 1. Sida Inuu qofka Indhaha biriq-biriq kasiiyo, Ruuxa caadiga waxa uu indhaha biriq-biriq kasiiyaa shan ilaa lix halkii daqiiqo. Sidaa darteed ruuxa boobsiiya indhabiriqsiga waxay muujinaysaa in uu beensheegayo. Xigasho – ‘Mark Bouton oo FBI muddo 30 sano ushaqaynaayay. 2. Isticmalka …
Qoraalkani waxaan kaga hadleynaa dhibaatoyinka ka jira qoysaska, iyo sida lagu helikara qoys wanaagsan islamarkaana leh tiir adag. Baryahaan dambe waxaa soo badanaayey furitaanka iyo bur-burka qoysaska iyo waliba dayacanka caruurta. Waxaase xusid mudan sidoo kale inay jiraan qoysas wanaagsan kuna guuleystay guurkoodi. Waxaa hubaal ah qoysaska guuleystay inay kasoo gudbeen dhibaatoyin farabadan, waayo guul walba lagaaro waxaa kahoreysa dhibaatoyin iyo caqabada u baahan in laga gudbo.Waxaa hubaal ah dhibatooyinka iyo caqabadaha ay ka soo gudbeen inay u bur-bureen qoysas iyaga la`mid ah. “Hadaba, sideen kuheli karnaa qoyska wanagsan­?” Waxaa jira qodoba muhiim ah oo keenaaya guushaas, waxaana ka …
Dadka Soomaaliyeed waa dad ay soo foodsaartay dhibaatooyin farabadan 30-kii sano ee lasoo dhaafay. Wadanka Soomaaliya waxa uu la kulmay dagaal sokeeye ee lagu baaba’ay kaasoo keenay in bulsho badani u qaxaan dunida dacaladeeda. Wadanka Norway wuxuu ka midyahay wadamada siiya magangelyada dadka qaxootiga, sidaa darteed wadankaan waxa kunool Soomaali farabadan oo lagu qiyaaso inay kor u dhaafayaan 40 kun. Hadaba, waa maxay caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysata Soomaalida Norway iyo waliba kuwa kale caalamka intiisa kale kunool? Laga bilaabo burburkii dowladdii dhexe ee 1991, maamul nidaamsan ee dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeya masoo marin Soomaaliya. Taasna waxa laga dhaxlay nidaam-xumo, …